भगवान: तीन देवताहरू? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
के त्रिएकको शिक्षाले तीन देवताहरू छन् भनेर बताउँछ?
कसै-कसैले गलत धारणा गर्छन् कि त्रिएक सिद्धान्त [त्रिएक सिद्धान्त] ले सिकाउँदछ कि "व्यक्ति" शब्द प्रयोग गर्दा तीन देवताहरू अवस्थित छन्। उनीहरूले निम्न भन्छन: यदि परमेश्वर पिता वास्तवमा "व्यक्ति" हुनुहुन्छ भने उहाँ आफैले परमेश्वर हुनुहुन्छ (किनभने यसमा ईश्वरीयताको गुणहरू छन्)। ऊ "एक" ईश्वरको रूपमा गणना गर्ने थियो। पुत्र र पवित्र आत्माको सन्दर्भमा पनि यस्तै भन्न सकिन्छ। यसैले त्यहाँ तीन अलग देवताहरू हुनेछन्।
यो त्रिएकवादी सोचको बारेमा सामान्य गलत धारणा हो। वास्तवमा भन्ने हो भने, त्रिएकको शिक्षाले भनेको छैन कि पिता, पुत्र, वा पवित्र आत्मा दुवैले परमेश्वरको पूर्ण प्रकृतिले भर्दछन्। हामी त्रिएक संग tritheism भ्रमित गर्न सक्दैन। ट्रिनिटीले भगवानको बारेमा के भन्छ त्यो परमेश्वर प्रकृतिमा एक हुनुहुन्छ तर त्यस स्वभावको आन्तरिक भिन्नताका हिसाबले तीन। क्रिश्चियन विद्वान् एमेरी बानक्राफ्टको पुस्तक क्रिश्चियन थिओलजीमा छ ("क्रिश्चियन धर्मशास्त्र"), पृ। 87 88,, निम्नानुसार:
" बुबा जस्तो कि परमेश्वर हुनुहुन्न; किनकि परमेश्वर बुबा मात्र हुनुहुन्न तर छोरा र पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। पिता भन्ने शब्दले ईश्वरीय प्रकृतिमा यस व्यक्तिगत भिन्नतालाई चिह्नित गरेको छ, जुन अनुसार परमेश्वर पुत्रसँग र पुत्र र पवित्र आत्मामार्फत चर्चसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ।
छोरा जस्तो कि परमेश्वर हुनुहुन्न; किनभने परमेश्वर केवल एक छोरा हुनुहुन्छ, तर उहाँ पिता र पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। छोराले ईश्वरीय प्रकृतिमा यस भिन्नतालाई चिह्न गर्दछ जसको आधारमा परमेश्वर पितासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र पिताले संसारलाई छुटकारा दिन पठाउनुभएको थियो, र उसले पवित्र आत्मा पितासँग पठाउँदछ।
पवित्र आत्मा जस्तो कि परमेश्वर हुनुहुन्न; किनभने परमेश्वर पवित्र आत्मा मात्र हुनुहुन्न तर पिता र छोरा पनि हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले ईश्वरीय प्रकृतिमा यस भिन्नतालाई चिह्नित गर्नुभएको छ जसको आधारमा परमेश्वर पिता र पुत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र उनीहरूले अभक्तहरूलाई नवीकरण गर्ने र चर्चलाई पवित्र पार्नको लागि पठाइएको छ। ”
जब हामी त्रिएकको शिक्षा बुझ्ने प्रयास गर्दछौं, हामी होशियार हुनुपर्दछ कि हामी कसरी "भगवान" शब्द प्रयोग गर्छौं र बुझ्छौं। उदाहरणको लागि, नयाँ करारले परमेश्वरको एकताबारे जे पनि भन्छ, त्यसले येशू ख्रीष्ट र परमेश्वर पिताको बीचमा पनि भिन्नता ल्याउँछ। यस बिन्दुमा, Bancroft को सूत्र माथि उपयोगी छ। यथार्थमा भन्ने हो भने, जब हामी ईश्वरको कुनै hypostasis वा "व्यक्ति" लाई जनाउँछौं भने हामीले "God God पिता", "God Son" र "God पवित्र आत्मा" को कुरा गर्नुपर्दछ।
यो "सीमितता" को बारेमा कुरा गर्न, उपमा प्रयोग गर्न वा भगवानको प्रकृतिलाई अरु केहि तरीकाले व्याख्या गर्न को लागी पक्कै जायज छ। यस समस्यालाई मसीही विद्वानहरूले राम्ररी बुझेका छन्। उनको लेखमा पोइन्ट अफ ट्रिनिटेरियन थियोलोजी ("ट्रिनिटेरियन थिओलजीको बिन्दु", १ 1988 of, टोरन्टो जर्नल अफ थिओलजी), टोरोन्टो स्कूल अफ थिओलजीका प्राध्यापक रोजर हाइट भन्छन्। उहाँ त्रिएक ईश्वरशास्त्रका केही समस्याहरू खुल्लमखुल्ला स्वीकार्नुहुन्छ तर त्रिएकत्व कसरी परमेश्वरको प्रकृतिको शक्तिशाली विवरण हो भनेर बताउनुहुन्छ - जहाँसम्म हामी सीमित मानिसहरूले यस प्रकृतिलाई बुझ्न सक्दछौं।
मिलार्ड इरिक्सन, एक उच्च सम्मानित ईश्वरविद् र ईश्वरशास्त्रका प्राध्यापक, पनि यो सीमितता स्वीकार्छन्। उहाँको पुस्तक ईश्वर तीन व्यक्तिहरूमा ("तीन व्यक्तिहरूमा ईश्वर") पृष्ठ २258 मा उनले अर्का विद्वानले र "आफ्नै" बाट "अज्ञान" को प्रवेशलाई जनाउँछन्:
"[स्टीफन] डेभिसले हालसालैका समसामयिक स्पष्टीकरणहरू [ट्रिनिटीको] जाँच गरेका छन र उनीहरू आफूले दाबी गरेको कुरा हासिल गरिरहेका छैनन भनेर पत्ता लगाएका छन, उनी इमान्दार थिए जुन उनले महसुस गरे कि उनले गोप्य कुरा गरिरहेका थिए। , सायद हामीमध्ये धेरै उहाँ भन्दा इमान्दार भएको हुन सक्छ, जब कडा दबाबमा, हामीलाई यो थाहा छ कि हामीलाई वास्तवमा थाहा छैन कि परमेश्वर कसरी एक हुनुहुन्छ र उहाँ कसरी तीन भिन्न हुनुहुन्छ। "
के हामी वास्तवमै बुझ्दछौं कि परमेश्वर एकै समयमा कसरी एक र तीन हुन सक्नुहुन्छ? होईन। हामी जस्तो ईश्वरको जस्तो कुनै वास्तविक ज्ञान छैन। केवल हाम्रो अनुभव सीमित छैन, तर हाम्रो भाषा पनि। भगवानबाट hypostasis को सट्टा "person" भन्ने शव्दको प्रयोग एक सम्झौता हो। हामीलाई एक शब्द चाहिन्छ जसले हाम्रो भगवानको व्यक्तिगत स्वभावलाई जोड दिन्छ र केही हदसम्म फरकको अवधारणा समावेश गर्दछ। दुर्भाग्यवस, "व्यक्ति" शब्दले मानव व्यक्तिको लागि प्रयोग गर्दा छुट्टै हुने विचार पनि समावेश गर्दछ। त्रिएकका अनुयायीहरूले बुझ्दछन् कि परमेश्वर त्यस्तो व्यक्तिको प्रकार हुनुहुन्न जुन व्यक्तिको समूह हो। तर "ईश्वरीय प्रकारका" व्यक्ति के हो? हाम्रो उत्तर छैन। हामी हरेक शब्द "ईश्वर" लाई भगवानको हरेक hypostasis को लागी प्रयोग गर्छौं किनकि यो एक व्यक्तिगत शब्द हो, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो कि हामीहरु संग उहाँहरुका व्यवहारमा परमेश्वर एक व्यक्तिगत व्यक्ति हुनुहुन्छ।
यदि कसैले त्रिएकको धर्मशास्त्रलाई अस्वीकार गर्दछ भने, उसको वा उनको कुनै व्याख्या छैन जुन परमेश्वरको एकतालाई बचाउँछ - जुन एक पूर्ण बाइबलीय आवश्यकता हो। त्यसकारण इसाईहरूले यो सिद्धान्त बने। तिनीहरूले परमेश्वर एक हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता स्वीकारे। तर उनीहरूले यो बुझाउन चाहन्थे कि येशू ख्रीष्ट पनि धर्मशास्त्रमा ईश्वरत्वको हिसाबले वर्णन गरिएको छ। जसरी यो पनि पवित्र आत्मामा लागू हुन्छ। त्रिएकको शिक्षालाई व्याख्या गर्ने अभिप्रायले विकसित गरिएको थियो, जसरी मानव वचन र विचारहरूले यसलाई अनुमति दिन्छ, कसरी परमेश्वर एकै साथ एक र तीन हुन सक्नुहुन्छ।
शताब्दीयौंदेखि परमेश्वरको स्वभावको अन्य स्पष्टीकरणहरू भएका छन्। एरियनवाद यसको एउटा उदाहरण हो। यस सिद्धान्तले दाबी गर्दछ कि छोरा सृष्टि गरिएको थियो त्यसैले ईश्वरको एकतालाई बचाइनेछ। दुर्भाग्यवस, एरियसको निष्कर्ष मौलिक रूपमा त्रुटिपूर्ण थियो किनभने छोरा सृष्टि गरिएको प्राणी हुन सक्दैन र अझै पनि परमेश्वर हुन सक्छ। पुत्र र पवित्र आत्माको प्रकाशको सम्बन्धमा परमेश्वरको स्वभावको बयान गर्न अगाडि राखिएका सबै सिद्धान्तहरू केवल खराबी मात्र नभई घातक रूपमा त्रुटिपूर्ण पनि भएका छन्। त्यसकारण त्रिएकको शिक्षा बाइबलको सत्यताको संरक्षण गर्ने परमेश्वरको प्रकृतिको व्याख्याको रूपमा शताब्दीयौंदेखि रहिरहेछ।
पल क्रोल द्वारा